Gịnị bụ ahịa Orchestration? | Martech Zone
Tọzdee, Eprel 23, 2020 Tọzdee, Eprel 23, 2020 Douglas Karr
O siri ike ikwere ogologo oge m na-ede blọgụ m, mana ahụrụ m n'anya na m nwere ike na-ezo aka na posts ochie n'otu oge. Afọ iri gara aga, edere m ndị ọkachamara na mgbasa ozi ọhụụ dịka ha ndị na-eduzi egwu:
Ndi ndu abughi ndi okacha mara nma nke nwere ngwa ahia obula; n'agbanyeghị nke a, ha ghọtara nke ọma otu esi ewepụta ngwa ọrụ ọ bụla, mee ka ha niile na-arụkọ ọrụ ọnụ, ma nwee ọmarịcha egwu. Ọ dị njọ na anyị akpọghị onwe anyị ndị nduzi ahịa!
Gaa n'ihu taa, na orchestration ahịa bụzi okwu a na - ahụkarị iji kọwaa etu ndị ahịa na - eji usoro dị iche iche na ọwa dị iche iche iji wulite mmata na itinye aka na ndị na - ege ha ntị. A na-eji okwu ahụ eme ihe mgbe a na-atụle Akaụntụ Dabere na Akaụntụ ebe ọ bụ na ebumnuche ahụ amara nke ọma na mgbe ahụ a na-emeghe usoro ihe omume iji mee ka atụmanya ahụ pụta site na njem ndị ahịa, na-eduga ha na ntụgharị.
Nke a bụ otu Engagio, usoro nyocha azụmaahịa, na-akọwa orchestration ahịa:
Orchestration ahịa bụ ụzọ maka ahịa nke na-elekwasị anya ọ bụghị n'ịnapụta mkpọsa na-enweghị atụ, kama kama ịkwalite usoro mmekọrịta mmekọrịta metụtara yana, mgbe agbakwunyere ọnụ, mepụtara ahụmịhe ndị ahịa dị iche iche.
Lodabere na ichota usoro ịre ahịa nke ọ bụla abụghị naanị azụmaahịa ọhụụ, ịnwekwara ike ịkwanye ozi na mgbasa ozi maka ire ere na ịgbanye ohere, mmeghari ohuru, ma ọ bụ nye ndị ahịa ohere ịghọ ndị nkwado. Engagio kewara ọkọlọtọ ọkọlọtọ n'ime edemede 5:
Ejije Orchestration Ahia
Ebumnuche na njikọ aka - ụzọ dị mma iji jide n'aka na ị na-enweta ọtụtụ ihe n'uche gị na ntinye aka data, ya mere aha ahụ. Jiri ha mgbe onye nwere ike ịzụta ya nọ na ngalaba nyocha na nchọta.
Akaụntụ Akaụntụ Azụmaahịa (MQA) - ejiri ya oge akaụntụ a na-atụ anya eruola oke nke ọrụ ma ọ bụ nkwekọrịta zuru oke ịchọrọ ịre ahịa iji soro ha.
Ikwanye Osisi Egwuru - mgbe ị nwere olile anya na-ekwu maka Ahịa, mana ha agbaala ọchịchịrị. Hapụ atụmanya ndị a pụtara ịhapụ ihe ndị ị ga-eme, n'ihi ya, ọ kwesịrị mgbalị iji tinyeghachi.
Emechiri Egwu Egwuru - ndị ahịa dị adị dị mma maka egwuregwu ebumnuche maka ịbawanye ọnụọgụ ahịa nke onye ahịa gị. Ha nwere ike ịgụnye mmeghari ohuru, ire ere, nkwalite, na ịkwado ndị ahịa.
Ihe Emechiri Emechiri Emechi - mgbe nkwekọrịta dara, ndị a nwere ike inyere gị aka ịmata ihe ị mejọrọ ka ị ghara ịmeghachi otu mmejọ ahụ n’ọdịnihu. A pụkwara iji ha mee ka ha nweghachi akaụntụ site na ndị asọmpi.
Orchestration bụ ihe nwere ike na-emenye ụjọ, mana ọ gaghị adị - ịbịaru nso dị ike ma dịkwa mkpa na azụmaahịa azụmaahịa na azụmaahịa azụmaahịa (ABM)
a infographic si Engagio na-akọwa akụkụ dị iche iche n'ụzọ dị mfe ịgbaso na ụzọ ọhụụ. You na-emeghe ka ikenye nke a? Engagio ga-enwe obi ụtọ idepụta ụfọdụ ọdịnaya soro.
Orchestration ahịa nwere ike ịdị mgbagwoju anya. Engagio esitewokwa na ntuziaka ga - egosi gị otu esi etinye ndị otu na sistemụ gị dị ugbu a iji mee ka ABM dị mfe ma dịkwuo irè. Ha etinyekwala egwuregwu iri na asatọ a haziri ahazi ga-egosi gị ọ bụghị naanị otu esi ahazi ahịa gị, kamakwa otu esi eji akpaaka iji mee ka mgbatị na-enweghị isi.
Budata Orchestration na Ọgbọ ọzọ nke akpaaka
Tags: ahia di na akaụntụorchestration ahịaahia akwukwo egwu egwuorchestrationejije orchestration